လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့စာအုပ် (၅)အုပ် - For her Myanmar
လူငယ်ပေါင်းများစွာကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ မှော်အစွမ်းတွေများလား
အောင်မြင်မှုခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးနိုင်မယ့်၊ အောင်မြင်မှုလမ်းရှိရာကို ညွှန်ပြပေးနိုင်မယ့် စာအုပ်တွေဟာလည်း အရေးပါပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးတွေကို ဖတ်ရှုပြီး ကိုယ့်အတွက် ဘာတွေလိုအပ်တယ်၊ ဘယ်လိုအရာတွေကိုပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အကောင်းဆုံးသော ပြောင်းလဲမှုပဲပေါ့..
ဒါကြောင့် လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်ရေး စာအုပ်ငါးအုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေကတော့..
၁။ Think and Grow Rich
ဒီစာအုပ်ကိုတော့ အောင်မြင်ရေးစာအုပ်၊ ချမ်းသာရေးစာအုပ်၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြှင့်တင်ရေးစာအုပ်လို့ ကြိုက်သလိုခေါ်လို့ရပါသတဲ့။ Napoleon Hill ရေးသားတဲ့ Think and Grow Rich ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၃၇ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဒီစာအုပ်ဟာ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ စာရေးသူချမှတ်ပေးထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို တိတိကျကျလိုက်နာနိုင်ရင် ထူးခြားတဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့လဲ ဆိုထားပါတယ်။ အောင်မြင်ချမ်းသာရေးစာအုပ်ဆိုပေမဲ့ အောင်မြင်ချမ်းသာဖို့သက်သက် ညွှန်းဆိုချင်တာမဟုတ်ဘဲ ဘဝအမြင်တွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာပါတဲ့။
Related Article >>> စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးနိုင်မယ့် စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်
၂။ Awaken the Giant Within
စာရေးဆရာ Tony Robbins ရေးသားတဲ့ Awaken the Giant Within ဟာလည်း လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအမြင် နဲ့ ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်၊ ရုပ်ပိုင်း နဲ့ စိတ်ပိုင်း၊ ငွေကြေး ဒါတွေကို ပိုင်နိုင်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို လမ်းညွှန်ပြသပေးမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Don’t Sweat the Small Stuff and Its All Small Stuff
ဒီစာအုပ်မှာတော့ ဘဝရဲ့ အရေးမပါတဲ့ကိစ္စ သေးသေးလေးတွေကို လျစ်လျူရှုနိုင်ဖို့ လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ပြောင်းလဲမှုသေးသေးလေးတွေကို ဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆိုတာတွေ လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Don’t Sweat the Small Stuff and Its All Small Stuff စာအုပ်ကိုတော့ စာရေးဆရာ Richard Carlson ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ The5Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage
Mel Robbins ရေးသားထားတဲ့ ဒီ The5Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage စာအုပ်မှာတော့ ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းငါးခုအကြောင်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့၊ အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုပြင်ဖို့၊ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့၊ ပိုမိုပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကို ရဖို့ အချိန် ငါးစက္ကန့်ပဲကြာတယ်လို့ စာရေးဆရာကဆိုထားပါတယ်။
၅။ The Subtle Art of Not GivingaF*ck: A Counterintuitive Approach to LivingaGood Life
ဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုတော့ ယောင်းတို့ကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ မြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာ ထင်ရှားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ဘဝနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး အောင်မြင်ရေးလမ်းညွှန်စာအုပ်ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာရဲ့ တုတ်ထိုးအိုးပေါက်စာရေးဟန်ကို လူငယ်တွေပိုသဘောကျတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
အရေးမပါတဲ့၊ အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ အရာတွေများနေတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ ဒီအရာတွေကိုလျစ်လျူရှုပြီးဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲဆိုတာ ဒီစာအုပ်က လမ်းညွှန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယောင်းတို့ကို လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ငါးအုပ်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီဆိုတော့ ယောင်းတို့ရဲ့ ဘဝကိုရော ဘယ်လို စာအုပ်တွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေး ပြန်မျှဝေပေးသွားဦးနော်..
References: everydaypowerblog, developgoodhabits
လူငယျပေါငျးမြားစှာကို ပွောငျးလဲပေးခဲ့နိုငျတယျဆိုတော့ မှျောအစှမျးတှမြေားလား
အောငျမွငျမှုခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးနကွေတဲ့ လူငယျတှအေတှကျ စိတျဓာတျခှနျအားပေးနိုငျမယျ့၊ အောငျမွငျမှုလမျးရှိရာကို ညှနျပွပေးနိုငျမယျ့ စာအုပျတှဟောလညျး အရေးပါပါတယျ။ ဒီစာအုပျလေးတှကေို ဖတျရှုပွီး ကိုယျ့အတှကျ ဘာတှလေိုအပျတယျ၊ ဘယျလိုအရာတှကေိုပွငျဆငျသငျ့တယျဆိုတာကို နားလညျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ အကောငျးဆုံးသော ပွောငျးလဲမှုပဲပေါ့..
ဒါကွောငျ့ လူငယျတှရေဲ့ဘဝကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျခဲ့တဲ့ အောငျမွငျရေး စာအုပျငါးအုပျနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဒီစာအုပျတှကေတော့..
ဒီစာအုပျကိုတော့ အောငျမွငျရေးစာအုပျ၊ ခမျြးသာရေးစာအုပျ၊ စိတျဓာတျခှနျအားမွှငျ့တငျရေးစာအုပျလို့ ကွိုကျသလိုချေါလို့ရပါသတဲ့။ Napoleon Hill ရေးသားတဲ့ Think and Grow Rich ဆိုတဲ့ဒီစာအုပျကို ၁၉၃၇ ရကျနမှေ့ာ ထုတျဝခေဲ့ပွီး ဒီစာအုပျဟာ လူသနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ဘဝကို ပွောငျးလဲပေးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဒီစာအုပျထဲမှာ စာရေးသူခမြှတျပေးထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို တိတိကကြလြိုကျနာနိုငျရငျ ထူးခွားတဲ့ဘဝကို ပွောငျးလဲနိုငျမယျလို့လဲ ဆိုထားပါတယျ။ အောငျမွငျခမျြးသာရေးစာအုပျဆိုပမေဲ့ အောငျမွငျခမျြးသာဖို့သကျသကျ ညှနျးဆိုခငျြတာမဟုတျဘဲ ဘဝအမွငျတှကေိုလုံးဝပွောငျးလဲပေးနိုငျမှာပါတဲ့။
Related Article >>> စိတျဓာတျခှနျအားပေးနိုငျမယျ့ စာအုပျလေးနှဈအုပျ
စာရေးဆရာ Tony Robbins ရေးသားတဲ့ Awaken the Giant Within ဟာလညျး လူငယျတှရေဲ့ အတှေးအမွငျ နဲ့ ဘဝကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျခဲ့တဲ့ စာအုပျတဈအုပျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီစာအုပျထဲမှာတော့ အောငျမွငျဖို့အတှကျ လူတဈယောကျရဲ့ဘဝမှာ အရေးအကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ စိတျခံစားခကျြ၊ ရုပျပိုငျး နဲ့ စိတျပိုငျး၊ ငှကွေေး ဒါတှကေို ပိုငျနိုငျစှာ ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို လမျးညှနျပွသပေးမယျ့ စာအုပျတဈအုပျဖွဈပါတယျ။
ဒီစာအုပျမှာတော့ ဘဝရဲ့ အရေးမပါတဲ့ကိစ်စ သေးသေးလေးတှကေို လဈြလြူရှုနိုငျဖို့ လမျးညှနျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါတငျမက အခကျအခဲတှကွေုံလာတဲ့အခါ ဘယျလိုတညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျမလဲဆိုတာနဲ့ ကွီးမားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှဖွေဈပျေါလာဖို့ ပွောငျးလဲမှုသေးသေးလေးတှကေို ဘယျလိုစတငျရမလဲဆိုတာတှေ လမျးညှနျထားတာဖွဈပါတယျ။
Don’t Sweat the Small Stuff and Its All Small Stuff စာအုပျကိုတော့ စာရေးဆရာ Richard Carlson ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။
Mel Robbins ရေးသားထားတဲ့ ဒီ The5Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage စာအုပျမှာတော့ ဘဝကိုပွောငျးလဲနိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့ စညျးမဉျြးငါးခုအကွောငျး ဖျောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာ ယုံကွညျမှုရှိဖို့၊ အခြိနျဆှဲတတျတဲ့ အကငျြ့ကိုပွငျဖို့၊ ကွောကျရှံ့စိုးရိမျမှုတှကေို ကြျောလှားနိုငျဖို့၊ ပိုမိုပြျောရှငျတဲ့ ဘဝကို ရဖို့ အခြိနျ ငါးစက်ကနျ့ပဲကွာတယျလို့ စာရေးဆရာကဆိုထားပါတယျ။
ဒီစာအုပျအကွောငျးကိုတော့ ယောငျးတို့ကို အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးစရာလိုမယျမထငျပါဘူးနျော။ မွနျမာလူငယျတှကွေားမှာ ထငျရှားလူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ စာအုပျတဈအုပျဖွဈပါတယျ။ ဒီစာအုပျရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ဒီနခေ့တျေလူငယျတှရေဲ့ ဘဝနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံး အောငျမွငျရေးလမျးညှနျစာအုပျဖွဈပွီး စာရေးဆရာရဲ့ တုတျထိုးအိုးပေါကျစာရေးဟနျကို လူငယျတှပေိုသဘောကတြယျလို့ဆိုကွပါတယျ။
အရေးမပါတဲ့၊ အနုတျသဘောဆောငျတဲ့ အရာတှမြေားနတေဲ့ ဒီလောကကွီးမှာ ဒီအရာတှကေိုလဈြလြူရှုပွီးဘယျလိုနထေိုငျကွမလဲဆိုတာ ဒီစာအုပျက လမျးညှနျပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
ယောငျးတို့ကို လူငယျတှရေဲ့ဘဝကိုပွောငျးလဲပေးနိုငျခဲ့တဲ့ စာအုပျငါးအုပျအကွောငျးပွောပွခဲ့ပွီဆိုတော့ ယောငျးတို့ရဲ့ ဘဝကိုရော ဘယျလို စာအုပျတှကေို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိခဲ့တယျဆိုတာလေး ပွနျမြှဝပေေးသှားဦးနျော..
Tags: Book review, Books, Knowledge, Life Coach, Motivation, Motivational Books
ကိုယ်ဝန်ရှိရင် (၂) ယောက်စာ စားရတယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
Sugar Cane November 29, 2018